RAZER CORTEX DOWNLOAD: GAMECASTER နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
မြင်ယောင်ကြည့်ပါသင်က Web page ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း, ကဘရောက်ဇာကိုတဆင့်ကစားရန်လိုလားပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအသုံးပြုမှုကိုအော့ဖ်လိုင်းအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိစောင့်ရှောက်ရန်မသာဗီဒီယို, သီချင်းနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားသငျသညျထားရှိမည်။ Mozilla Firefox ကိုအဘို့အ FlashGot ဖြည့်စွက်ဒီတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
FlashGot - ဒီ add-on ဖိုင်များလင့်များကိုကြားဖြတ်နားထောင်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာမှသူတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာဖြစ်သော Mozilla Firefox browser ကိုများအတွက်။
Mozilla Firefox ကိုအဘို့အ FlashGot install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
1. တရားဝင် developer ၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာ link ကို Follow နှင့် button ကို click "Install" installation စပါရန်။
2. သငျသညျ Fleshgot Mazilu မှဒေါင်းလုဒ်နှင့်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
3. တပ်ဆင်ဖြည့်စွက်ဖို့, သင် browser ကို restart လုပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
FlashGot အနှစ်သာရဒီ tool ကိုသငျသညျအငျတာနကျပျေါနီးပါးမည်သည့် site မှမီဒီယာဖိုင် upload တင်ခွင့်ပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။ အခါ FlashGot အဘယ်သူမျှမရရှိနိုင်ပါ downloads, ရှိပါတယ် default အအိုင်ကွန်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပြသလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီသူတို့ကအထက်ညာဖက်ထောင့်၌တွေ့ကြသည်အဖြစ်အိုင်ကွန်ဖြည့်စွက်ပြပေးလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့အကြိုက်ဆုံးစီးရီးတစ်ခုစီးရီး load ချင်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ကစားပေါ်မှာထားပြီးလျှင်, ကျနော်တို့ကို download လုပ်ချင်သောဗီဒီယို, နှင့်အတူတစ်ဘရောက်ဇာကိုစာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျနော်တို့အိုင်ကွန်ဖြည့်စွက်၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်မှာ loading လုပ်တာထားရှိမည်ပါလိမ့်မည်သည့်ဖိုင်တွဲကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ အဲဒီနောကျပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့ပေါ်လာနှင့် FlashGot ချက်ချင်းဖိုင်ကို download လုပ်ပါမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဟုတ်ဘူး။
Browser ကိုသင် Firefox ကို menu မှာ downloads, ကိုခြေရာခံနိုင်မခုန်ဖိုင် (သို့မဟုတ်ဖိုင်များကို) စတင်သည်။ ဒေါင်းလုဒ်ပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ဖိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ဘို့အမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အခုတော့ FlashGot settings ကိုရန်သင့်အာရုံကိုလှည့်။ , ထို configuration ကိုဖြည့်စွက်ရပုံပေါ်သောစာရင်းအတွက် Menu ခလုတ်ကိုအပေါ် browser ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ, select လုပ်ပါရန် "ထို့အပြင်".
လက်ဝဲ pane ထဲကမှာ tab ကိုမှသွားလာ, "Extensions"။ လက်ျာ-click FlashGot အကြောင်းကိုအတွက် add-on ကိုခလုတ် "Settings" ကို.
မျက်နှာပြင်သည်ပြတင်းပေါက် FlashGot settings ကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ tab ကို "အခြေခံ" အခြေခံ parameters တွေကို FlashGot အခြေချခဲ့သည်။ ဒီနေရာတွင်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကိုပြောင်းလဲ (ကို default Built-in ဖြစ်ပါတယ် browser ကို) နှင့်ဖြည့်စွက်ဘို့ hotkey configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
tab ကို "Menu ကို" FlashGot မှတဆင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့ download ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဥပမာ, ဖြည့်စွက် browser မှာအားလုံး tabs များပွင့်လင်းဝန်သယ်နိုင်ပါတယ်။
tab ကို "ဒေါင်းလုဒ်များ" သငျသညျအလိုအလျှောက်ဒေါင်းလုဒ် start ကို disable နှင့် FlashGot စောင့်မမည်သောဖိုင် extension configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခြား tabs များအတွက် setting များကို default စွန့်ခွာရန်အကြံပြုသည်။
FlashGot - browser ကို Mozilla Firefox ကိုတဆင့်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့်အစွမ်းထက်နှင့်တည်ငြိမ်ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖိုင်မှတ်တမ်း tab ကိုဖွင့်လှစ်ရင်တောင်သင်အွန်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်အညီ, FlashGot နေဆဲသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မကယ်နိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နေ့စွဲရန်, ထို့အပြင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဆိုက် developer များထပ်မံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုသူအလှူငွေလက်ခံသော Donut, ဖွင့်လှစ်။
Download FlashGot အခမဲ့
ဗီဒီယို Watch: How To Install & Activate, Razer Cortex Game Booster Latest Update FOR FREE (အောက်တိုဘာလ 2019).